Fiompiana tantely | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fiompiana tantely
Azo atao ny mihinana tantely ao amin'ny honeycomb, ny fomba hahazoana tantely avy amin'ny tantely any an-trano
Ny tantely tantely dia vokatra voajanahary izay, noho ny fofomam-boninkazo misy azy sy ny tsirony mahatalanjona tsy tambo isaina, dia feno fahatsapana fahavaratra fotsiny. Hatramin'ny vanim-potoana hatrizay, ny tantely vita amin'ny tantely dia heverina ho vokatra be dia be azo avy amin'ny famokarana labiera, saingy tsy ny rehetra no mahafantatra ny tena mahasoa ny tantely.
Ny anjara asan'ny drone ao amin'ny kolontsain'ny renintantely
Ho an'ireo olona mahafantatra momba ny fikikisana amin'ny fihainay, sarotra ny mahatakatra ny atao hoe drone ary nahoana no ilaina ao anaty lavaka rongony. Maro ny olona no tsy mahafantatra afa-tsy ny tsy fahita firy amin'ny maha-izy azy: ny drone dia tsy manao na inona na inona ao amin'ny hive, fa mihinana dimy. Na izany aza, ao anatin'ny tondra-drano tsirairay, ny natiora dia manome ny fisian'ireo olona marobe ireo.
Famaritana ny karazana tantely iombonana
Fantatsika hatramin'ny fahazazany fa ny tantely dia sakafo matsiro sy mahasalama. Androany, ny tsena dia manome antsika karazana tantely maro samihafa. Anisan'ireny, indrisy, manjo azy ireo izany. Mba hividianana kalitao tsara ary tsy manimba ny fahasalamanao dia zava-dehibe ny mahafantatra ny karazana tantely sy ny toetra ananany.
Famaritana ny tantaran'ny tantely ary ny fahasamihafana eo amin'izy ireo
Raha nofinofy ny nofinao, dia tokony ho fantatra aloha hoe inona no karazan-tantely ary inona no fahasamihafana eo amin'izy ireo. Ny voay tsirairay dia manavaka ny fahombiazany, ny toetrany, ny fanoherana ny hafanana, ary ny bika aman'endrina. Hatramin'izao, manerana izao tontolo izao dia afaka manisa karazana vorona roa ambinifolo ianao.
Bibidia misy tantely: inona no ampiasainy, ahoana no fisafidianana, mitahiry sy mety
Tsy tsiambaratelo izany, arakaraka ny zavamaniry izay manangom-bary manangom-bokatra, ny fahasamihafana sy ny tombony amin'ny tantely dia tsy mitovy. Amin'izao fotoana izao isika dia hiresaka momba ny sarobidy indrindra - tantely buckwheat. Mba hividianana tantely kely, ny tantely dia tsy maintsy manangom-bokatra afa-tsy amin'ny voninkazo voninkazo, izay, araka ny efa hitanao, manome antsika buckwheat.
Karazam-batana ho an'ny mpandray anjara, hanombohana
Alohan'ny hanombohana mamorona rongony, ny mpihinam-bokatra voalohany dia tokony hianatra ny fototry ny karazam-borona. Ity lahatsoratra ity dia misy toro-hevitra fototra ho an'ny mpihinana iray vao manomboka: aiza no hanombohana, ahoana ny fisafidianana ny tantely, ny karazana boaty, ny fikarakarana tsara, ary ny hafa. Ny fotodrafitr'andriambola, tokony ho fantatra aloha ianao. Ny karazana labozia ho an'ny vao manomboka dia karazana alfabeta.
Ny famokarana tantely avy amin'ny fanamarihana dia hetsika ilaina ho an'ny mpihinana rehetra. Indraindray ny fiainan'ny fianakaviana bee dia miankina amin'izany, ary avy eo ny fanafody "Bipin" dia tonga amin'ny fanampiana, izay ahitana ny amitraz. "Bipin": ny famaritana, ny endrika ary ny famotsorana ny amitraz, izay no singa fototra ao amin'ny "Bipin", dia fanafody natao hiadiana varroa.
Fampahalalana sy fomba fampiasana ny "Apira" fanafody
Amin'ny fampisotroana dia matetika ny fanafody isan-karazany no ampiasaina hampitomboana ny isan'ireo olona sy ny rambony ao amin'ny rongony. Hevero ny iray amin'izy ireo ankehitriny - ny zava-mahadomelina "Apira". Fanangonana, famotsorana, fampahalalana ankapobeny "Apira" - zava-mahadomelina izay manamora ny fisamboran'ny tondra-drano mandritra ny tondra-drano. Voapoizina amin'ny plastika sarisary 25g isaky ny jiro, fa fotsy hoditra fotsy.
Ny bakteria manao-it-tena: endri-pananganana trano ho an'ny tantely
Ny boka dia ampiasaina mba hanafenana ny tokantranony ao anaty lavaka na satroboninahitra matevina. Noho izany, mba ahafahan'ny bibikely mampiakatra haingana kokoa any amin'ny tontolo vaovao, mikarokaroka ny mpamboly za-draharaha miezaka ny manamboatra fepetra tsara ho an'ny tantely mba hamboly sy hamorona tantely mahafinaritra. Ao amin'ity lahatsoratra ity, ianao dia hianatra ny fomba hananganana hivefana amin'ny tananao manokana, inona ireo fitaovana tsara indrindra ho an'ny fialofana labiera sy safidy ho an'ny fandaharana.
Ahoana no handraisana ny mead ao an-trano ary inona no tokony hataonao
Mead - zava-pisotro fantatra amin'ny vahoaka hatramin'ny vanimpotoana Rosia fahiny. Nomanin'ny razambentsika izany ary ankehitriny dia tsy very ny lazany. Afaka mividy zava-pisotro any amin'ny trano fivarotana mora foana ianao ankehitriny, fa maro amintsika no tia ny tena zava-tsarobidy an-trano. Ho an'ireo zava-tsarobidin'ny fikarakarana sakafo, ny nomerao dia omena eto ambany, dia hilaza ity lahatsoratra ity, ary koa hianatra torohevitra mahasoa maro.
Ny fomba fitantanana sy ny dosage "Apimaks" ho an'ny tantely
Ny fahamendrehan'ny apiary dia miankina amin'ny fahasalaman'ny tantely. Ny mpitsabo mpanampy dia tsy manadino velively ny fepetra fisorohana ary indraindray dia manipy ny rongony amin'ny fiomanana azo antoka. Voaporofo tsara ny "Apimaks" - balsama azo antoka sy mahomby, manafoana ny aretina sy ny parasy. Famaritana sy famoahana ny endriky ny balsam bee Apimax Balsam dia fiterahana manokana izay ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny aretina sy ny bakteria amin'ny tantely ary Nozema.
Inona no atao hoe mpitroka tantely?
Medogonka - fitaovana manan-danja ao amin'ny rongony. Io fomba famokarana io dia ahafahanao mahazo tantely vaovao avy amin'ny tantely. Ny lahatsoratra dia momba ny medogonki, ny fomba fampiasana azy ireo sy ny fomba hisafidianana tsy ho diso. Ny fampiasana tantely tantely amin'ny mikon-koditra. Ny mpihinam-bary rehetra dia mila tantanana tantely, satria ny tantely voangona amin'ny tantely dia tsy maintsy atao amin'ny tantely mihidy.
Ahoana ny fomba hamoahan-doha an'i Dadan anao
Matetika ny mpihinam-bitsika rehetra no mampiasa ny fanolorana ny planina nomena na ny fanovana azy. Ny anaran'ny trano tantely dia fanomezam-boninahitra an'i Charles Dadan - mpamokarana frantsay izay nampiasa ny fivoaran-draharaha mialoha ny fotoanany, namorona ny endriky ny hivezivezy iray misy vongan-dranomamy misy maromaro lehibe 11 sy isa maromaro an-tampony.
Ahoana no fomba hanamboarana raki-tsolika amin'ny tananao manokana?
Ankehitriny, tsy sarotra ny manamboatra karazan-tsakafo maromaro. Ny famolavolana toy izany dia azo vidiana amin'ny toeram-pivarotana manokana amin'ny fivarotana fitaovana ho an'ny beekeeping. Fa raha te-hamonjy vola ianao ary hahatsapa ihany koa ny fahaizanao mamorona, dia afaka manamboatra zavatra mitovy amin'izany ianao amin'ny tananao.
Ahoana ny fomba hanamboarana tantely maromaro
Ny fitazonana tantely amin'ny karazan-tsakafo dia zavatra iray monja ho an'ny mpihinana matihanina. Io fomba io dia nalefa noho ny fonctionnaire. Raha ny marina, dia mihamaro in-telo ny hamafin'ny tantely. Andeha hojerentsika ny antony. Fomba fanehoana an'ohatra Ity karazana hive ity dia azo atao tsy miankina.
Ny zavamaniry tsara indrindra amin'ny tantely ho an'ny tantaranao
Mba hahazoana volavolan-tantely tsara, dia tena manan-danja tokoa ny manana ahi-bozaka lava be eny akaikin'ny apiary. Raha tsy misy, afaka manampy ny natiora ianao ary manampy amin'ny fambolena zavamaniry izay afaka mamokatra vovobony sy nectar. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome lisitry ny zavamaniry tsara indrindra isika, manampy amin'ny sariny miaraka amin'ireo anarana.
Nahoana ny mpiompy no mahafinaritra ny moka?
Hoatran'ny hoe, inona ny fampiasana ny tsimokaretina misy poizina, izay tsy mety amin'ny biby? Saingy tsy misy - amin'ny natiora, ny zava-drehetra dia manana ny fampiharana azy. Ary ny tsikombakomba mahazatra, izay malaza amin'ny beekeepers, dia manamafy indray izany. Famaritana botanika Ity toeram-pambolena bitika ity dia azo jerena na any amin'ny dian-tongotra sy eny amin'ireo làlana, na eo amin'ny tetezana lava, ary any akaikin'ny fanariam-pako.
Mpandihy tantely lehibe amin'ny tananao manokana
Mba hanamboarana tantely, mila fitaovana manokana ianao - mpanafody tantely. Ny vidin'ny fitaovana toy izany dia tsy ambany, ka tsy ny rehetra no afaka mividy izany. Ity lahatsoratra ity dia hifanakalozana ny fomba fanaovana ny tantanana tantely amin'ny tananao manokana. Ahoana no iasany? Ny tantely dia manjavona amin'ny asan'ny hery misintona. Izany dia mitranga toy izao: ny tantely dia vita printy amin'ny fampiasana antsy manokana; dia ampidirina ao anaty kasety izay mihazona ilay frame mandritra ilay dingana; Ny fihodinana dia mivadika ary ny tantely dia natsipy teny amin'ny faritry ny rongony tantely; Avy eo dia mitsofoka any ambany izy ary mankany amin'ny lavaka mba hosotroina.
Ahoana ny fomba anaovana tantely tantely?
Ny tantely, angamba, dia iray amin'ireo fanomezana sarobidy indrindra amin'ny natiora, izay efa nahafantarana sy nankasitraka hatramin'ny ela ny olombelona. Ny fiankohofana dia fibodoana izay mitaky fahalalana sasantsasany mikasika ny tantely tantely (tsy ny marenina rehetra no afaka mamokatra tantely), ny fandaminana ny fianakaviana bee sy ny toe-piainana izay mampifaly ny fivelomany. Ny firafitry ny tantely tantely Ny vatan'ny bibikely dia mizara ho fizarana telo: ny loha, ny tratra ary ny kibo.
Ny asany lehibe indrindra amin'ny vehivavy bee ao amin'ny fianakaviana bee
Ny renitantely dia azo antsoina hoe mpanjakavavin'ny raviny. Izy no tompon'andraikitra amin'ny asa fototra izay miantoka ny fisian'ny mponina manontolo bevohoka, ny fitohizan'ny karazam-biby sy ny fihazonana ny fahafaha-mitondra ny zaza. Ny isam-pianakaviana tsirairay avy ao amin'ny vala dia tompon'andraikitra amin'ny sehatra samihafa. Drones dia lehilahy lahy, izay tsy natao afa-tsy ny fampiroboroboana ny tranonjaza.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fiompiana tantely